प्रार्थना पोइन्ट्स सपनामा कुकुरको टोकाइ नष्ट गर्न | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स सपनाहरूमा कुकुरको टोकाइ मेटाउन प्रार्थना अंकहरू
सपनाहरूमा कुकुरको टोकाइ मेटाउन प्रार्थना अंकहरू
आज हामी सपनामा कुकुरको टोकाइलाई नष्ट गर्न प्रार्थना पोइन्टहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। शारीरिक क्षेत्रमा समेत कुकुरको टोकाउनु राम्रो कुरा होइन, सपनामा मात्र छोडिदिनुहोस्। जब एक सपना मा एक मानिस कुकुरले टोक्छ, यो स्थिर, अलग, भयानक हुन सक्छ बिरामी, यौन अशुद्धता र अधिक धेरै। बाइबलले कुकुरहरूको बारेमा के भन्छ? को पुस्तक फिलिप्पी :3:१:2: "कुकुरहरूदेखि सावधान रहनुहोस्, दुष्टकर्मीहरूदेखि होशियार रहनुहोस्, सर्तकताबाट सावधान रहनुहोस्।" धर्मशास्त्रले कुकुरहरू दुष्ट कामदारहरू हुन् भनेर वर्णन गरेको छ।
शैतानले मानिसहरूको जीवनमा प्रवेश गर्ने एउटा तरिका कुकुरहरूको प्रयोगको माध्यमबाट हो। त्यस्तो व्यक्तिले के पत्ता लगाउँदछ कि ती अब यौन अशुद्धताबाट टाढा रहन सक्दैनन्। अन्य, यसले तिनीहरूको स्वास्थ्य र वित्तमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। जब तपाईं व्यभिचार र व्यभिचार रोक्न नसक्ने मानिसहरूलाई देख्नुहुन्छ, तिनीहरू कुकुरको आत्माको द्वारा लिन सकिन्छ। कहिलेकाँही यसले असफल सम्बन्धमा पुर्‍याउँछ। जेसुकै केस जस्तोसुकै होस्, तपाईंले कुकुरले टोक्नु भएको सपना देखेमा तपाईंले हठी प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रतिकूल प्रभाव कम हुन सक्छ र यो अधिक खतरनाक स्थितिमा बढ्न सक्दछ।
सपनाहरु आत्मिक वास्तविकता हुन् जुन हामीलाई देखाइन्छ। भगवानले तपाईको समस्याको कारण बताउन सक्नुहुन्छ। यसैले प्रार्थना गर्नु महत्वपूर्ण छ विशेष गरी जब तपाइँको निन्द्रामा तपाइँलाई केहि कुरा देखा पर्दछ। म अधिकारका साथ आदेश दिन्छु कि तपाईंको जीवनलाई असर गर्ने कुकुरको हरेक आत्मा येशूको नाममा नष्ट हुन्छ।
प्रभु, म तपाईंलाई भन्छु कि तपाईंको शक्तिले गर्दा, कुकुरले टोक्ने हर विषलाई येशूको नाममा मेरो जीवनलाई असर गर्ने गरी नाश गर्नेछु।
कुकुरको हरेक आत्माले मलाई व्यभिचार गर्न वा व्यभिचार गर्न बारम्बार गरेको कारण म तपाईंलाई येशूको नाममा आज हप्काउँछु।
हे प्रभु, म स्वर्गको अधिकारबाट फरमान्छु, मेरो जीवनमा स्थिरताका हरेक आत्माले कुकुरले मेरो सपनाबाट डस्यो, म तिमीलाई येशूको नाममा आज रद्द गर्छु।
म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु, कुकुरको रूपमा मेरो निद्रामा मलाई देखा पर्ने हरेक शक्ति र रियासतहरू, तपाईं पवित्र आत्माको आगोले नष्ट गर्नुभयो।
मेरो वंशका सबै पुर्ख्यौली शक्तिहरू जुन मेरो पुस्तामा सबैलाई सताउनका लागि परिचित छन्, म तपाईंलाई येशूको नाममा मेरो जीवनमा रद्द गर्दछु।
हे व्यभिचार र अवैध यौनसम्बन्धको भूत, आज येशूको नाममा मबाट फर्किनुहोस्।
हे प्रभु, प्रत्येक कुकुरले मेरो आत्मिक विकासलाई असर पार्ने सपनाबाट टोक्छ, पवित्र आत्माको आगोले तिनीहरूलाई येशूको नाममा जलाऊन्।
प्रभु, म येशूको नाममा मेरो जीवनमा बिरामीलाई हप्काउँछु। मैले मेरो निद्रालाई ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतले तृप्त पारें। प्रत्येक चोटि म सुत्न आँखा बन्द गर्दा, म प्रभुको दूत येशू को नाममा म साथ हुन भनेर निर्णय गर्दछु।
सपना देखी प्रत्येक रगत चुस्ने राक्षस डर देखा पर्न, म तिमीलाई येशूको नाममा आज श्राप।
किनकि यो लेखिएको छ, हामीलाई डरको आत्मा दिइएको छैन तर अब्बा बुबालाई रोक्नको लागि छोरात्वको। म येशूको नाममा मेरो जीवनमा हरेक प्रकारको डरको विरुद्धमा छु।
प्रभु, मैले मेरो युद्धको हतियार राखेको छु। आज देखि मैले आफूलाई परमेश्वरको हतियारले मूर्त रूप दिएँ। मेरो आत्मा मानिस येशूको नाम मा अलौकिक शक्ति प्राप्त।
नरकको खाडलबाट मेरो जीवनमा फालिएको हरेक राक्षसी एर्रो, म तिमीलाई येशूको नाममा सात पटकमा प्रेषकलाई फिर्ता पठाउँछु।
पवित्र आत्माको आगो आउनुहोस् र शत्रुको हरेक आक्रमणलाई कुकुर प्रयोग गर्दै मलाई येशूको नाममा मलाई राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्।
मेरो विवाहलाई नष्ट गर्न मेरो निन्द्रामा मलाई टोक्न दुश्मनले पठाएको प्रत्येक राक्षसी कुकुर, म तिमीलाई येशूको नाममा नष्ट गर्छु।
मेरो सम्बन्ध बिगार्न दुश्मनले पठाएको प्रत्येक राक्षसी कुकुर, येशूको नाममा आज मृत्युमा पसे।
प्रभु येशू, म प्रार्थना गर्दछु कि दुश्मन हो कि सबै दुष्ट कुकुरले आफ्नो डस प्रयोग गर्दै मेरो जीवन र भाग्यलाई बदनाम गर्न, येशूको नाममा आज मर्नुहोस्।
स्वर्गको अधिकारबाट म भन्छु कि मेरो आत्मा मानिसमा परमेश्वरको शक्ति आउँछ। सपना मा एक कुकुरको टोको संग लड्न र प्रतिरोध गर्न को शक्ति, यो येशूको नाम मा आज म माथि आऊ।
म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि मेरो शरीर र आत्मा येशूको नाममा कुनै कुकुरले टोक्ने खतरामा पर्दछ। आजदेखि, म येशूको नाममा अन्धकारको शक्तिको लागि एक त्रास हुँ।
धर्मशास्त्रले भन्छ, मेरो घोषणा नगर र मेरो भविष्यवक्ताहरुलाई कुनै हानि नगर। आजको दिनदेखि म भन्छु, म येशूको नाममा छुवाछिन छु। आजदेखि, म येशूको नाममा शत्रुको शक्तिको लागि एक त्रास हुँ।
म प्रार्थना गर्दछु कि येशूको रगतले काट्ने सबै शक्तिलाई उन्मुख पार्नेछ येशूका नाममा मेरा सपनाहरूमा।
धर्मशास्त्रमा यो लेखिएको छ, “म ख्रीष्टको छाप राख्छु कसैले मलाई हैरान नपारोस्।” म यो शब्दको प्रभावकारितामा खडा छु र म आदेश दिन्छु कि म येशूको नाममा त्रास नपरोस्।
येशूको नाममा मेरो जीवनमा शत्रुको शक्तिले केही असर पाउने छैन। म येशूको नाम मा ममाथि शक्ति हुनेछैन।
किनकि यो लेखिएको छ, म उनीहरूलाई आफ्नै मासुले पिउनेछन्, र उनीहरू आफ्नै आफ्नै रगतले मातिने मदको दाखरस जस्तो छन्। तब सबै मानिसहरूले थाहा पाउनेछन् कि म नै परमप्रभु हुँ। am तपाईंको उद्धारकर्ता, र तपाईंको उद्धारक, याकूबको एक शक्तिशाली हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्र आत्मा, अब उठ्नुहोस् र येशूको नाममा कुकुरहरू मार्फत मेरो जीवनलाई सताउने हरेक राक्षसी शत्रुलाई बदला लिनुहोस्।
म मेरो जीवनमा यौन अशुद्धताको हरेक खराब बानी विरूद्ध आउँछु, म यसलाई पवित्र आत्माको आगोले नष्ट गर्दछु। मेरो जीवनमा व्यसनको हरेक रूप, म यसलाई येशूको नाममा रद्द गर्दछु।
अघिल्लो लेखमाप्रार्थना पोइन्ट्स भन्न जब तपाईं निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ
अर्को लेखमासपनाहरूमा मास्केराडेसको बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्ट्स
किम्बरली के होवार्ड मिलर जुन 4, 20216मा: 35 बिहान
हे भगवान, ईश्वरका मानिस, मलाई यस प्रार्थनाको साच्चै आवश्यकता थियो। म प्रायः मेरो जीवन भर कुकुरको आत्माले आक्रमण गरेको छु र किन वा मैले शब्दमा, सोचमा, वा यो आत्माको ढोका खोल्नको लागि हो कि के गरिरहेको हो भनेर वास्तवमै मैले बुझिन। मेरो जीवनमा ईश्वरको मानिसलाई प्रयोग गरेकोमा धन्यवाद! येशुको नाममा म तपाईलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले उसलाई आशीर्वाद दिऊन् र उसलाई राख्नुहोस् र तपाईमाथि तपाईको महिमित ज्योति चम्काउनु होस् र तपाईको जीवनबाट तपाईले सारा महिमा पाउनुहुनेछ। आमेन
१०० दैनिक प्रार्थनाहरू जीवनमा सफलताको लागि
अनौठो रोगहरू निको पार्ने लागी प्रार्थना